Maxaa looga hadlay Kulanka maanta ee Golaha Wasiirada Hirshabelle? - Jowhar Somali news Leader
Home News Maxaa looga hadlay Kulanka maanta ee Golaha Wasiirada Hirshabelle?
Maxaa looga hadlay Kulanka maanta ee Golaha Wasiirada Hirshabelle?
Madaxweyne Ku Xigeenka Dowlad Goboleedka HirShabeelle ahna Kusimaha Madaxweynaha Md Ali Gudlaawe Hussein ayaa maanta shir gudoomiyay kulankii todobaadlaha ee golaha wasiirada xukuumada DG Hirshabeelle kaasoo looga hadlay arimo ay kamid yihiin Amniga Warbixin howleedka todobaadlaha ee Wasaaradaha iyo ka doodista dhameystirka Dastuurka Qabyo Qoraalka ah oo Cutubkiisii labaad Todobaadkaan lagu wareejiyay Madaxweyne Ku Xigeenka HirShabeelle Md Cali Guudlaawe.
Shirka Golaha Xukuumada oo todobaadkiiba mar qabsooma waxaa maanta goluhu falanqeeyeen Xaaladaha Amaanka ee deegaanada iyo degmooyinka DG Hirshabeelle iyo in dhowaan la sameyn doono howlgallo ka dhan ah kooxaha argagixisada oo lagu xureynayo deegaano badan.
Shirka intii uu socday waxaa warbixin howleedka todobaadka looga dhageystay wasaaradaha hirshabeelle iyadoo Wasiiradana la faray inay laba laabaan waajibaadka shaqo ee ay umadda u hayaan.
Sidoo kale kulanka Golaha Wasiirada intii u socday waxaa aad looga dooday qorshaha dhameystirka Dastuurka Jamhuuriyada Federaalka Somaliya oo cutubkiisii labaad gudiga dhameystirka usoo gudbiyeen DG Hirshabeelle si ay usoo indha indheeyaan wixii caqabad ku ah bulshad hirshabeelle iyo guud ahaan umadda somaliyeedna meesha uga saaraan.
Ugu dambeyn Madaxweyne Ku Xigeenka Dowlada HirShabeelle Md Cali Guudlaawe Xuseen oo shir gudoominayay shirka golaha ayaa gudi 11 Wasaaradood ah u saaray talo kasoo bixinta howlaha dhameystirka Dastuurka.
golaha wasiirada ee hirshabelle oo maanta kulmay